Dayran Xeradaa Dibad, Doqon Baa ku Ducaystay – Rasaasa News
Dayran Xeradaa Dibad, Doqon Baa ku Ducaystay
Nov 5, 2009 ONLF
Maxaa keenay in xubno ONLF ah oo Qoryahooda wata ay Kaalinka 5aad soo galaan oo aan waxba la yeelin, qaar kalena lagu ugaadhsado dalalka dariska laguna dhibaateeyo?
Guursan maayee Eebow yaanan goblamin, tabcan maayee Eebow yaanan xoolo waayin, ducooyinka noocaas ah ee ku baxay odhaahda Somalida Eebahay in uusan aqbalin ruuxii caqli leh wuu garan. Talada adigaa ku nool ee iyadu kuguma noola, waxaan u araranayaa waxaa weeye arinka maanta ummada Ogadeeniya haysta ma aha wax cusub waan uun qaciido ka mid ah qaacidooyinkii uu mari jiray halgankeenu sagaal iyo afartankii sano ee ugu dambaysay.
Waxaan in badan oo badan aan wax ka qoray, halaaga haysta halganka somalida Ogadeeniya ee ay horseeka ka ahayd Jabahada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], ama jeclow ama ha jeclaan waxay Jwxo martay Nasrulahi iyo Somali Galbeed meeshii ay mareen. In ay hal wado wada maraan waxaa masuuliyadeeda leh dad kooban oo mid waliba xiligiisa aad moodo in uu midba kii ka horeeyey kaga dayanayo.
Kolka la sameeyo hayad waxaa lagu sameeyaa shuruuc, waxaana lagu hagaa sharci, sharciga ayaa wax wada ee dadku ma wadaan. aduunkan aan maanta ku noolahay waxaa inta Eebe weyne ka sokaysa ku amar ku taagleeya dalalka reer galbeedka, iyaguna waxay aad u tixgaliyaan shuruucda iyo doorashada dadweynaha [democracy].
Galbeedku inta ayeyna gacan qabasho u yeelan urur ama Hayyad waxa kolka ugu horesa eegaan sida ay ugu dhaqmaan shuruucda ay dhigteen, waxaana u soo baxda in dadkaasi ay yihiin dad la aamini karo iyo in ay yihiin dad aan la aamini karin, oo aan wax maamuli karin.
Jwxo, waxaa lagu dhisay sharci waxayna ahayd in lagu dhaqo sharci, in badan runtii waxaa lagu dhaqay sharciga, waxaase xigay xaarka maanta taagan. Eritrea, waxaa aduunku u yaqaan xukuumad argagixiso ah, iyada ayaana Jwxo u noqotay go,aamiyaheeda, waxayna laashay wax alaale wixii ay sharci lahayd Jwxo.
Jwxo-shiil [Cumar Cismaan], waa cirfiidka halganka ONLF, tan iyo 2004-tii, waxaa la arkayey Ibtilo ku soo socota halganka ay ONLF waday, ummada Somalida Ogadeeniya Oday iyo Ilmaba way arkaysay meesha uu halganku u socdo, waxaana go,aan lagu qaatay in isha laga dhawro, arintaas oo khalad ahayd ilaa iyo maantana khalad ah.
Khilaafkii ugu xumaa kolkuu dhacay, waxaa naftooda Itobiya kula cararay masuuliyiin sare oo ONLF ah oo dadweynaha ka waayey wax difaaca. Naftu orod bay kugu aamintaa nafta in aad difaacdana xaq baad u leedhay, muddo yar ka dib waxaa buux dhaafiyey xeryaha gumaysigii lala dagaalamayey ciidamo Jwxo loo soo tabobaray, waxayna go,aansadeen in kolba hadii wanaag lagu heshiin waayey in cid waliba xumaan qasato.
Ciidamadii Jabhada waxaa dib u shaqaaleeyey gumaysiga Itobiya oo ka faa,iidaystay hadii run la sheegayo, waxay dagaalo la galeen saaxiibadoodii duurka ku hadhay ee ay kala aamin baxeen, waana lagag adkaaday gudaha, dantuna waxay keentay in ay galaan dalalka dariska oo uu waliba si doqonimo ah Jwxo-shiil ugu sheegay in ay ka samaystaan Jaaliyado iyo Unigyo, ma meeshaas oo kale ayaa la iska muujin karaa.
Waxaa maanta taagan in xoogaagii ugu dambeeyey ay soo galaan Kaalinka 5aad iyaga oo aan waxba loo diranaynin. Waxaa Maamul gabaleedyada Somalida ee Puntlan iyo Somaliland, ay Itobiya u dirtay ciidamo xoog leh oo aan dhar ciidan xidhnayn, laakiin hubaysan oo wax alaale wixii ay doonaan sameeya, waxaana socota maanta waan ku dili oo adigaa dantii diiday, waan ku garan oo geed ku qarin maayo, meelaha aad ku dhuumanaysana cidi ii diidi mayso oo waxaa si aan toos ahayn u xukuma xukuumada Itobiya.
Jwxo-shiil oo ah kii dhibaatadan keenay, wuxuu meherda moodayaa oo uu maalinba soo hor fadhiistaa TV, isaga oo ay ummada Somalida oo dhan ciil u qabto, waxaa kale oo uu meherad mooadayaa in uu been ugu sheego London ciyaal yar yar [fish and chips] oo aan waxba ka ogayn Somalida Ogadeeniya iyo halgankeeda toona.
Puntland iyo Somaliland ruuxa doonaya in uu eedeeyo waxaan anigu ra,ayigayga odhan lahaa ha eedeeyo Itobiya, waayo iyaga ayaaba la haystaa, labo qaawan isma qaado.
Mid ka Mid ah 5 Nin oo uu Maamulka Puntland ka Qabtay Dekada Boosaaso oo Maanta Geeriyooday
Maadeey oo Xaaladiisa Caafimaad Aad Looga Dayrinayo